नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित ! एक शेयर गरौ «
नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित ! एक शेयर गरौ
प्रकाशित मिति : 22 May, 2020 7:47 pm
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक केहि समय अघी गरेको थियो । भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले गत बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेकी थिईन ।
नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरिन् । त्यही बेला अब सरकारी दस्तावेज र पाठ्यपुस्तकहरुम नयाँ संस्करणको नेपाली नक्सा नै प्रचलनमा ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताइकी थिईन ।